Qodobada Kati Taylor ee Martech Zone |
Maqaallada by Kati Taylor
Kati wuxuu ku jiray suuq geynta dijitaalka 12 sano. Shaqadeedii ugu horreysay ee xirfadeed waxay ahayd maaraynta ololeyaasha suuqgeynta iimaylka iyo websaydh ganacsade / qaybiyaha gudaha ah oo loogu talagalay saddex magac oo caalami ah. Tan iyo markaas waxay qaadatay door laxiriira, horumarineed. At Xalalka Suuqgeynta Sare, Kati waa istiraatiijiyad suuq geyn digital ah iyo naqshadeeye garaaf ah.
Isniin, Maarso 30, 2020 Isniin, Maarso 30, 2020 Kati Taylor
Aad ayey qiimo u leedahay in lala shaqeeyo hay'ad dusha sare ka joogta cusboonaysiinta suuqgeynta markasta. Maaddaama ganacsi kasta lagu qasbay inuu sameeyo isbeddello duruufaha adduunka ka jira awgeed iyo COVID-19 caafimaadka iyo badbaadada, waxay ka dhigan tahay bixinta tikniyoolajiyad ku filan shaqaalaha fog, u guurista adeegyo xiriir oo eber ah markay suurtagal tahay, iyo adkaynta xuubka kharashaadka ganacsiga. Xagee lagu qarash gareeyaa suuqgeynta doolarka waa mid muhiim ah xilliyadan. Ganacsiyada sidoo kale waa inay